Home Ulo oru Europe Laurent Koscielny Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Defensive Genius onye aha ya maara; "Bosscielny". Ụmụaka anyị Laurent Koscielny Akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-ezighị ezi Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha ahụ na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch facts (amaghị ihe) gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ike ya na-agbachitere ikike ma ole na ole tụlee akụkọ ndụ Laurent Koscielny bụ nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Laurent Koscielny Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ndụ mbido
A mụrụ Laurent Koscielny na 10th ụbọchị Septemba 1985 na Tulle, obodo nke atọ kachasị ukwuu na mpaghara Limousin nke France na ebe na-ezighị ezi na-egwu bọl, na nsogbu siri ike megidere obodo ya. A mụrụ Laurent Koscielny na Mr Bernard Koscielny bụ ndị ha na nwa ha nwoke nwere mba Polish.
Laurent toro na ezinụlọ ndị na-egwupụta akụ na Tulle, bụ obodo dị n'etiti France, ebe ebe izu efu na-agwụ mgbe enwere football n'ụkwụ. Akụkọ nwata ya na-adọrọ mmasị, ọ bụrụ na ọ bụghị ihe a na - ahụkarị - nke a nwatakiri nwoke nke nwere akuko na akuko akuko onye a gọziri agọzi nwere nkà pụrụ iche. Laurent n'oge ọ bụ nwata, nwere mkpebi siri ike ime ka nrọ ya mezuo. Nzube ya abughi nani ihe na-aga n'iru. Ụdị ọdịdị ọdịda nke Laurent, na-ekele nwanne ya nwoke nke okenye nke kegidere ma ọ dịghị eme ya n'egwuregwu ahụ.
N'okwu ya ..."Echiche nke igwu egwu dịka ndị na-agba ọsọ ọkachamara bụ naanị nrọ, ụdị ọchịchọ ọ bụla nwa ọgbọ m nwere ike ịtụ anya. N'oge ahụ, nanị ihe m na-eche bụ ịkụ bọl, egwu ma kpọọ ọzọ. Na-enwe obi ụtọ, na mụ na ndị enyi m na-ekere òkè oge. Ịgba bọl bụ ihe niile m na-eche banyere ya, dị ka ọtụtụ ụmụ m ga-abụ.
Laurent Koscielny Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ọrụ na Nchịkọta
Laurent malitere ọrụ ya na 2004 na Guingamp, otu ndị mepụtara talent dịka Didier Drogba na Florent Malouda. Ọ malitere ọrụ ọrụ ya dị ka aka nri azụ na ọ na-ewe nanị afọ atọ tupu ọ ghọọ ike ịchọta. Laurent tinyere otutu oru, onyinye, na ngbagwoju anya nke mere ka ewe bulie ya na Guingamp agadi squad ebe o gbanweere ya. Ozugbo Laurent bụ afọ 18, ọ malitere ịchekwa ego iji nye m na ezinụlọ m. N'ikpeazụ, ọ kwapụrụ Njikọ French dị ka ọ na-egwuri maka Tours na Lorient, na-enyere aka n'ikpeazụ ịkwalite nkwalite na football football nke France.
Ọ bụ agbachitere agbachitere Laurent nke dọtara mmasị na Arsenal nke kwadoro nbanye ya na 7 July 2010. Ogige ndị Arsenal kwadoro nkwekọrịta ahụ mana Arsene Wenger enweghị ike inye nkwenye ikpeazụ n'ihi na ọ nọ na South Africa ma hapụ ekwentị ya n'ụlọ. Oge ahụ bụ Koscielny kpatara edemede dị ka akwụkwọ akụkọ French na-akọ na ọ gara na-azụ ya na ndị òtù Arsenal ya na-enweghị ọkwa ọkwa na Wenger rụzuru ya. O mesịrị mechaa, e nyekwara ya 6 nọmba nke ụlọ ịgba chaa chaa, nke Philippe Senderos, bụ onye kwagara Fulham, mere n'oge gara aga.
Laurent Koscielny Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ndụ mmekọrịta
E nwere okwu na ọrụ ọ bụla dị mma chọrọ onye ziri ezi n'ebe kwesịrị ekwesị nakwa n'oge kwesịrị ekwesị. N'ezie, onye na-ahụ maka ọdịmma nke Laurent Koscielny nwere ndụ dị egwu nke nke mara mma ma dị mma. Claire Beaudouin, bụ enyi nwanyị ogologo oge.
Ndị enyi abụọ ahụ lụrụ di na nwunye na afọ 2015 na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na Arsenal na French.
Ọ bụ ezie na akwụkwọ akụkọ French dị ka ihe nwere mmasị karị Raphael Varane agbamakwụkwọ nke mere n'ụbọchị ahụ. Koscielny ekweghị ka ndị France na-edegharị ihe osise maka agbamakwụkwọ ya. Anyị nwere ike iche na Koscielny na-ezube ire foto ha dịka otu n'ime mmadụ ole na ole ị ga-ede n'Ịntanet bụ nwunye Lancivine Bacary Sagna.
Laurent na Claire nwere ụmụ mara mma abụọ; Maina na Noa Koscielny na-ese onyinyo n'okpuru nna ha. "Ụmụ m nyeere m aka ịga n'ihu na ndụ". kwuru, Laurent.
Mgbe nkuzi ya gasịrị, Laurent hụrụ n'anya na ọ ga-eburu ụmụaka ya n'ụlọ akwụkwọ ma lekọta ha ruo mgbe ngwụsị nke ehihie mgbe nwunye ya si ọrụ lọta.
Laurent Koscielny Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ihe Ezinụlọ
Malite na ezinụlọ ya, nna nna Koscielny bụ Polish. Ọ kwagara Northern France iji rụọ ọrụ dị ka onye ọrụ Polish. N'ụzọ dị mwute, ka oge na-aga, ya na ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ ya tụfuru asụsụ Polish na mgbọrọgwụ.
Nna nna Laurent na-egwuri egwu n'òtù nke anọ nke French football maka ọtụtụ klọb tupu ya abụrụ onye njikwa. Koscielny ekwuola nna ya, Bernard maka idebe ya n'ụwa ma na-enyere ya aka icheta ebe ọ si bịa nakwa otú o kwesịrị isi bụrụ eziokwu na mgbọrọgwụ ya. Nna ya bụ nnukwu ego nye ya Onye ghọtara ụwa nke bọl. Dị ka Koscielny si kwuo ya, ..."Ọ maara ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na anaghị m agbanye ụkwụ. N'ụzọ dị mma, ọ na-elegide m anya mgbe niile ma na-anọ mgbe niile iji nye m ndụmọdụ banyere nhọrọ m chọrọ ime. Echere m na enweela m obi ụtọ. Enwetara m ezigbo akwụkwọ, ma ndị mụrụ m ma ụmụnne m. Ha nile kụziiri m ụkpụrụ dị mkpa. Taa, ọ bụ oge m iji zipu ndị ahụ na ụmụ m. "
Nne nkuchi Laurent Koscielny nọ n'azụ ya mgbe nile inye nkwado nne. Ma taa, ọ dị ugbu a ná ndụ ya. Ka ọ na-etinye ya: "Ọ bụ na ọ bụ ihe dị mkpa na ọrụ na ndụ m: mmụọ ozi na-elekọta". O nwere nwanne nwoke na-agba ọsọ nke bụ 10 afọ karịa ya ma na-egwuri egwu n'egwuregwu ndị na-amakarị.
Laurent Koscielny Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ndụ nke Onye
Laurent Koscielny nwere àgwà na-esonụ na àgwà ya.
Ike Ike: Ọ bụ Onye Na-eguzosi Ike n'Ihe (ma ụlọ ma nwunye), debere, nyocha, ịrụsi ọrụ ike ma dị irè.
Àgwà adịghị ike Laurent: Ntughari, nwere ike ichegbu onwe gị banyere ihe, na-akatọ onwe gị na ndị ọzọ ma bụrụ ọrụ niile ma ọ dịghị onye ọ bụla egwu egwu.
Ihe Laurent na-enwe mmasị: Ọ na-amasị ụmụ anụmanụ, nri siri ike, akwụkwọ, ọdịdị na izugbe zuru oke.
Ihe Laurent na-achọghị: Ọchịchọ, ịrịọ maka enyemaka na ime ihe dị n'etiti.
Laurent bụ onye na-ege ntị mgbe niile na nkọwa kachasị nta na mmetụta miri emi nke ụmụ mmadu na-eme ka ọ bụrụ onye kachasị nlezianya ị ga-ama. Ụzọ ndụ ya na-eme ka o doo anya na ọ dịghị ihe ọ bụla fọdụrụnụ. Laurent bụ onye a na-aghọtahiekarị, ọ bụghị n'ihi na o nweghị ike ikwu okwu, mana n'ihi na ọ gaghị anabata mmetụta ya dị ka ihe ziri ezi, eziokwu, ma ọ bụ ọbụna ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ị megidere echiche.
Laurent Koscielny Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -enyi
Mmalite nke ọrụ Arsenal ya adịghị mma. Otú ọ dị, ọ dịghị anya Arsene Wenger hụrụ ịhụnanya ya n'anya nke ọma na kemgbe ahụ, Laurent na-ejikarị onwe ya nye onye na-akọ akụkọ ihe mere eme.
Laurent Koscielny Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ajụjụ & Oge
Laurent nyere azịza ụfọdụ QA ajụjụ dị mkpa ịmara. Ihe na-esonụ bụ ajụjụ na azịza ya.
onye bụ onye kachasị egwu ị na-eche ihu n'egwuregwu?
Drogba, n'egbughị oge.
Ebee / nke Egwuregwu ka ị nwetara nnukwu mbido?
Nke ikpeazụ nke Euro na France. Ọ bụ oge siri ike maka anyị. N'ihi na ọ bụ ihe omume na onye ọ bụla na-atụ anya na France. Echere m na n'ozuzu ya ọ bụ ihe ịga nke ọma, mana ịkwụsị mmeri bụ nnọọ ihe na-egbu mgbu. Ọ dị mgbe ọ na-ewute gị na ị gwụchaa ụdị njem dị otú a.
Mgbe ole ị ga-aga n'ubi, gịnị ka ị chere?
Mgbe m na-aga n'ubi, echeghị m banyere ya, mgbe anyị mechara ememe oriri, ana m agbalị itinye uche na egwuregwu m na naanị m n'egwuregwu m, iji chetara onwe m ihe m ga-eme n'oge egwuregwu ahụ, m na-agbalị inye ndị kachasị mma nke m otu, iji nweta ihe kacha mma.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Laurent Koscielny nke nwata anyị na-akọ akụkọ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.